Nyamavhuvhu 9, 2018 arun
Russian dare nyaya wokutanga wakanaka cryptocurrency kushambadza
Matare Russian Anonzi kwebhuku Edinstvo Nizhnekamsk, iyo circulates muRepublic of Tatarstan, kuva pakakuvara pakushambadzira mitemo. Nyaya vakauya kudare nomukombiyuta Federal Anti-chindingindingi Service & yomunzvimbo bazi tumisoro kuti reRussia Central Bank.
Hurumende raiti shambadzo iri mubvunzo, izvo nyore vakatakura okuti "Investments mu cryptocurrency. Bitcoin, Ethereum, Zcash. Assembly uye setup pakuchera mapurazi "pamwe kuonana runhare nhamba, akamhanya zvichipesana nemitemo pamutemo. "Kubva pfungwa zviri munhoroondo shambadzo, zvinoreva kuti Richard Timurovich Blumchen ari kupa mabasa zvemari, uye kwete kubvunza vaya,"Ari Anti-chindingindingi Service akanyunyuta, izvo zvakaita munhu akafanirwa kubhadhara faindi nokuda kukanganisa. http://www.interfax.ru/russia/624465
Australia kuona Powered Bitcoin mugodhi purazi rayo rokutanga rezuva
WokuAustralia Data centre opareta uye ayo cryptocurrency chikamu kukura zvavanenge tsanangura sezvo nyika yokutanga "shure-the-afoot Data centre" dzinofambiswa ne renewable simba. Rakamiswa muguta Collie marasha-mugodhi, zvimwe 200km kumaodzanyemba muPerth, nzvimbo itsva iri kugadzirwa Data centre opareta DC Two uye chikamu D Coin uye achapiwa dzinofambiswa pedyo nokuora papurazi.
Kambani akati "Nokupa customized pasi mutengo nemitambo nzira zvakananga engineered kuti cryptocurrency uye Bitcoin kuchera panguva kwikwidzana yose prices, DC Two & D Coin vave kukwezva kufarira zvose munharaunda crypto mugodhi omunharaunda uye dzakawanda… In zvakakwana kuchera configuration crypto, kushandisa kwokutanga 4MW simba Kuwanikwa, humboo centre aigona kwangu pamusoro 650 BitCoins por annum munokosha kumativi $6 miriyoni kwakavakirwa ano mugodhi uye Exchange. "It yainorongwa kuti kwakatangwa Q1 2019.
cryptocurrency mabhizimisi GMO kwakaita vaiwana $ 2.3M mari Q2
Japanese IT Zirume GMO akashuma kuita uchishandisa kunobatsireiko $2.3 mamiriyoni nokuti cryptocurrency bhizimisi yaro 2nd kota gore rino. Mushumo The makasimba wacho Latest zvemari dzakaratidzei chekambani crypto chidimbu akaita $23 miriyoni mumumbure kwemari. Huwandu zvakapararira munyika crypto chidimbu akatosvika zvakafanana akatsemura pakati yemigodhi uye Exchange mabhizimisi.
wo, zvakasimba sokuti vakawedzera ayo mugodhi vanokwanisa muna 2nd kota. The kambani mined 512 BitCoins rokutanga chikamu gore rino, Iyo iduku pane 528 BitCoins GMO mined muna June 2018 oga.
Intuit rowana bvumidzwa nokuda processing Bitcoin kubhadhara pamwe mameseji
Bhizimisi California anotsanangura & zvemari-software kambani Intuit kwave paakavapa rimwe bvumidzwa kuti processing Bitcoin kubhadhara Via meseji. The bvumidzwa mashoko sei kwegadziriro chaivo nhoroondo aigona vakwanise vanoshandisa maviri kutamira mari vachishandisa maserura. The boka rokutanga nyaya yacho bvumidzwa mu 2014, nguva pfupi pashure pacho vatanga ayo QuickBooks Bitcoin kubhadhara basa, mumwe Bitcoin kutengeserana processor iyo madiki vaigona kushandisa kugamuchira Bitcoin mu chive pamusoro Fiat mari.
The chivimbo chakasimba munhu kubhadhara meseji chaigona kuitwa dzinoverengeka dzakasiyana, akadai kuburikidza “mumwe pasiwedhi chikumbiro chokuita nhoroondo mushandisi” kuti ironge mubhadharo. Mumwe anoshandisa voicemail sezvo mamwe chivimbo chakasimba. Intuit yagara achitarisa tivandudze kuwana Bitcoin mubhadharo processors. Kunyange zvazvo kufamba QuickBooks mu 2014, Kambani akaramba kuva kwayo mubhadharo papuratifomu, zvikuru ichangopfuura partnering ne muripo Provider Veem kuti vakwanise dzakawanda cryptocurrency kubhadhara.
Kraken Daily Market Mushumo 08.08.2018
$261M nhumbi mhiri misika zvose nhasi
Tobi Clayton anoti:
Nyamavhuvhu 27, 2018 pa 6:06 PM
Anton Zelinsky anoti:
Gumiguru 17, 2018 pa 3:15 PM